Ma habboon tahay in Naqshadeynta Webka 2.0 la xoqo? | Martech Zone
Ma habboon tahay in Naqshadeynta Webka 2.0 la xoqo?
Axad, Nofeembar, 25, 2007 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Elliot Jay Stocks ayaa qaylinaya dagaalka dagaalka loogu talagalay naqshadeeyayaasha… ka tag muuqaalka Webka 2.0 lana dagaallami macaamiishaada kuwa riixaya.
Xusuusin: Hubso inaad booqato Goobta Elliot, Naqshadeynta ayaa gabi ahaanba cajiib ah.
Kuma raacsani Elliot in la burburiyo. Ka shaqeynta qaybta Suuqgeynta, waxaad aqoonsan tahay inay jirto maskax daaqsin in la qaabeeyo. Shirkadaha sida Apple waxay leeyihiin jeebado qoto dheer waxayna leeyihiin rajo naqshad naqshadeysan oo la xiriirta astaantooda. Macaamiilku wuxuu filayaa in naqshadaha la xiriira alaabada Apple, baakadaha iyo suuqgeynta ay jabi doonaan dhul cusub. (Marka laga reebo xayeysiiska asalka madow oo leh iftiin dhalaalaya dhinac dhinac afhayeenka… Waxaan u maleynayaa inay u muuqato wax lagu qoslo).
Shirkadaha intiisa kale waxay ku habboon yihiin inay raacaan hoggaanka. Sida moodadu ula socoto isbeddellada, ayaa naqshaduna u raacdaa. 'Lo'du' waxay qadarinaysaa sharraxaadda muuqaalka ee tusaysa tusmada inay la xiriirto isbeddel gaar ah ama tikniyoolajiyad. Markaan la kulmo codsi cusub sida Mixx or rssHugger, Kahor intaanan qodin arjiga, waxaa igu dhacay muuqaalka muuqaalka ah ee ah inuu yahay codsi lagu dhisay teknolojiyadda ugu cusub.
Shakhsi ahaanta iyo hal-abuurnimadu waa muhiim, laakiin marka qof kasta oo kale xirto surwaal jiinis ah oo aad ka dhex muuqato gambaleelka, dadku isla markaaba waxay isweydiinayaan dareenkaaga moodada. Sax ama qalad, tani waa dhaqanka aadanaha. Waqtigan iyo maanta oo macaamiisha ay si dhaqso leh uga guurayaan MySpace ilaa Facebook, ama Twitter ilaa Tumblr, waa muhiim in nashqadeyntaadu kudayasho inaad qaadatay kii ugu dambeeyay fashion shabakada.
Waan ixtiraamayaa aragtida Elliot oo ah farshaxan karti iyo naqshadeeye gaar ah, laakiin waxaan kugula talin lahaa shirkadaha inaysan weli tirtirin naqshadda Webka 2.0. Xitaa Elliot wuxuu qirayaa inay jiraan sababo wanaagsan oo loo raaco lo'da. Aniga iyo Elliot waan ku heshiinay caqabada dhabta ah: Sida looga shaqeeyo xuduudaha shabakada sharraxaadda ee Web 2.0 oo aan wali u nimid asal ahaan. Oo haddaad raadineyso waxa walxaha muhiimka ah, Elliot wuxuu soo bandhigay bandhig weyn oo leh dhammaan bilicsanaanta la xiriirta naqshadeynta Webka 2.0!
Tags: kaydka elliot jayWebsaytka 2Websaytka 2.0design web
Ka waran haddii Bloggers ay ku dhaqaaqeen Strike?
Waxaan u diray Nuux $ 1000!
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 3:50 PM
Myopic caadi ah iyo naqshadeeye isku-kalsoon. Waxaan aqriyay qoraalkiisa kadib waxaan eegay bandhigiisa isagoo filaya inuu helo xoogaa aragti laakiin hadana waxaan helay qoraal ku wacdiyaya koox-kooxeedda dhagaystayaashiisa FOWD; koox mabda 'wadaagoodu rabo inuu helo xorriyad hal-abuur leh oo aan ka walwalin yoolalka ganacsi. Arrin layaableh ayaa ah nooca Webka 2.0 ee wakaaladda xayeysiiska oo diiradda saaraya ku guuleysiga abaalmarinno hal-abuur leh halkii aad xoogga saari lahayd wadista dakhliga illaa khadka hoose ee macaamiishooda.
Waxaan fiiro gaar ah siin lahaa Jakob Nielsen iyo Sharciga Nielsen: "Dadku waxay isticmaalaan degellada dadka kale aad uga badan taada (markaa ka dhigista bartaada mid la jaanqaadaysa boggaga kale waxay kordhin doontaa adeegsiga sidaas awgeedna waxay kaa caawin doontaa inaad ku guuleysato yoolalkaaga ganacsi.)
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 3:51 PM
Eeg, caqabaddu waxay tahay in dad badan oo aan naqshadeeyayaal ahayn ay sameystaan ​​naqshadeynta goobta iyaga u gaar ah .. Qaarkeen ayaa jecel inay karti u yeeshaan naqshadeynta goob sida Mr. Stocks, si kastaba ha noqotee waxaan haysannaa xirfad iyo / ama miisaaniyad aan ku sameyno.
Markii laga hadlayo "Web 2.0", haa naqshad lama sheegin, hase yeeshe, dhammaantayo waan wada fahamsannahay muuqaalka: alaab dhalaalaya, xarriiqyo, geesaha la jeexjeexay, milicsiga, iyo dhalaalka banaanka… (Waxaan u maleynayaa inaan dhammaantood daboolay!) . Xaqiiqdii, qof kastaa wuu ku boodayaa oo wuxuu la socdaa duurjoogta, si kastaba ha noqotee, haddii aan eegno waxyaabaha kale, waxaan ku harnaa hareero waaweyn oo midab leh (oo laga yaabo ama xitaa aan wada shaqeyn karin), dhammaystir la'aan qoto dheer, iyo murugo Webdings ama ka xun, clip-art…
Muuqaalka shabakadda 2.0 waa intayada inteena kale ah ee fahamsan inaynaan ka maarmin xirfadaha naqshadeeye runtii wanaagsan, haddana fahamsan qiimaha ay leedahay in xoogaa xoogaa la geliyo iyada oo laga gudbayo beddelka qoraalka asalka mawduuca WordPress default
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 9:02 PM
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee laga xannibo WordPress (ok. Ku saabsan CSS) waa inay kala soocdo naqshadeynta iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Taas oo macnaheedu yahay inaad soo degsan karto mawduuc si qurux badan loo naqshadeeyay oo aadan ka walwalin naqshadeynta wax badan ka dib.
Aniga mid ka mid ah waxaan hadda isku dayayaa inaan maro habka ugu yar, oo waxaan ku ciyaarayaa mowduuc nooca ku saleysan.
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 8:58 PM
Elliot wuxuu leeyahay midka ugufiican, uguna fikirka badan ugudambeynta mawduuca WordPress ee aan soo maray. Cajiib Ah Oo Xamaasad Leh.
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 9:20 PM
Waan ogolahay, modifoo! Waan ka xishoonayaa naqshadayda markaan fiirinayo mid sida ugu habboon loo qaabeeyey oo kale!